घमण्डी सत्ता आलीबाट लडेको छ र छटपटाउँदैछ
Saturday, 10 Aug, 2019 1:46 PM
कैलाश ढुंगेल प्रदेश नम्बर तीनका आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ । रामेछाम जिल्लाको जिल्ला सभापति समेत चलाइ सक्नुभएका ढुंगेल नेकपाका वौद्घिक नेतृत्वका रुपमा समेत चिनिनुहुन्छ । प्रदेश तीनको अर्थमन्त्री रहनुभएका ढुंगेलसँग सरकार गठन भएको १८ महिना बितिसकेको अवसरमा प्रदेश तीन सरकारले गदै आइरहेको काम, कारर्वाही, जनगुनासो र आगामी योजनाबारे चक्रपथ डटकमका लागि दिनेश घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
दुई बर्ष हुन लाग्यो सरकार बनेको यो बीचको समयमा प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभुति हुने खालका के कस्ता काम अघि बढायो ?
प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो बर्षको धेरै समय नियम कानून बनाएर नै बित्यो । त्यसपछिका ६ आठ महिनापछि मात्र हामीले विकासका पाइलाहरु चाल्यौं ।
तीन नम्बर प्रदेशमा कृषि पर्यटन र पूर्वाधारहरुलाई नै बढि महत्वका साथ अगाडी बढायौं । सँगसँगै शिक्षा स्वास्थ्यको काम पनि गर्यौं । प्रदेशले केही गौरवका कार्यक्रमहरु पनि सुरु गरेको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयको कुरा छ । पुष्पलाल चक्रपथको कुरा छ र भिमफेदी काठमाडौं सुरुङ मार्गको कुरा छ । यी हाम्रो प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु हुन् । यी सँगसँगै कृषि क्षेत्रमा विशेषगरी व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र कृषिलाई वैज्ञानिक खेती प्रणालीमा लानका लागि एकिकृत खेतीको काम पनि हामीले सुरु गरेका छौ । सँगसँगै प्रदेश ३ को जिल्लाहरुमा रहेका विभिन्न हावापानीमा रहेको माटोमा कुन क्षेत्रमा के के उब्जनी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको म्यापिङ पनि सुरु भएको छ । माटोले दिने तागत र क्षमतालाई हामीले अधिकतम् प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले एउटा सिस्टम बसाल्न खोजिरहेका छौ ।
हामीले माछा हुने ठाउँमा माछा, फुलखेती हुने ठाउँमा फुल खेती, फल खेती हुने ठाउँमा फल खेती लिची अलैची चिया, पशुपालनमा चौरी गाई देखि लिएर धेरै दुध दिन गाईहरु पाल्ने क्षेत्रगत अध्ययन सुरु गर्दैछौ । तराई तथा मेधेश क्षेत्र जस्तै सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन लगायतका ठाउँमा एकिकृत खेती पनि सहकार्यमा गराउँदैछौ । प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा हरेक विद्यालयमा नर्सको एउटा दरबन्दी राख्दैछौ । हरेक जिल्लामा कृषिको लागि चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरेका छौ । हरेक जिल्लामा स्टेडिम बनाउँदै छौ र हरेक पालिकामा खेलखुद मैदान बनाउँदै छौ । समूदायलाई त्यसको व्यवस्थापिकीय र शैक्षिक क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउन १५ लाखदेखि ५ करोडसम्म अनुदान दिइरहेका छौ । सहरमा हामीले कौशी खेती सुरु गरिरहेका छौ ।
काठमाडौंको सहरहरुमा विषादी धेरै छ । बाहिरबाट तरकारी आउनु पर्छ । हरेक घरका छतमा अलिकति भएपनि घरयासी लाई मात्र टार्ने गरी तरकारी उत्पादन भए कति तरकारी आयात कम हुन्छ र कति अर्गानिक तरकारी खान पाउँछन् भन्ने खालको वौद्घिक जमातले बुझ्नु पर्छ । किनभने एउटा घरमा बुझ्दा ठूलो कुरा भएन तर समग्र उपत्यकालाई बुझ्नु भयो भने कति तरकारीको खपत गर्न सक्छौ । विशेषगरी कृषिमा दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई हामीले अनुदान दिएका छौं । दुधमा आत्म निर्भर हुने प्रदेश पर्छ यो । मासुमा आत्मनिर्भर हुने प्रदेशमा पर्छ । दुध चाही प्रदेशको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने क्षेत्रमा पर्छ । अझैपनि के गरीस् भन्दा पनि के गर्दैछौ भन्ने कुरा छ रिजल्ट आउन समय लाग्छ । त्यसो भएको हुँदा प्रदेशले के गर्यो भन्दा धेरै चिजहरु गरेको छ । त्यो एकैछिनमा भन्न सकिने अवस्था पनि नहोला ।
तीन नम्बर प्रदेश सवैभन्दा बढी जनसंख्या भएको, सांस्कृतिक सम्पदा अनि देशकै राजधानी र एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भएको क्षेत्र यसको विकास निमार्णका लागि विशेष योजनाहरु के के छन् ?
हाम्रो प्रदेश देशकै सेन्टरको रुपमा छ । राष्ट्रिय राजधानी पनि यसैमा छ । ठूलो जनसंख्या पनि छ, त्यै भएर होला अरु प्रदेशको भन्दा झण्डै १२÷१५ अरब बजेट पनि बढि यही छ । अहिले हामी झण्डै ४८ अरबको बजेटमा छौ । हाम्रो प्रदेशमा एक सिंगे गैडादेखि रेडपाण्डासम्म पाइन्छ । विश्वसंपदा सूचिमा परेका १०÷१२ वटा ठाउँमध्ये ८ वटा ठाउँ त यसैप्रदेशमा पर्छ । कतिबेला सूर्यदय झुल्किन्छ भन्ने हो भने नेपालको पात्रो अनुसार गौरी शंकरको टुप्पो, सूर्यदयको टुप्पोदेखिने ठाउँपनि यसैमा पर्छ । अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल पनि यसैमा पर्छ । विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, कृषि पुश विश्वविद्यालय यसैमा पर्छ । पर्यटकीय हिसावले काठमाडौं पहिलो र तेस्रोमा चितवन पर्छ । हामीले दोलखालाई पनि अर्को गन्तव्य खोज्दैछौ । त्यसो भएकोहुँदा पर्यटनमा पनि हामी माथि छौ । सिन्धुली गढीको किल्ला, मकवानपुर गढीको किल्ला, चिसापानी गढी पनि यसैमा पर्छ भन्दा तीन नम्बर प्रदेश नेपाललाई झल्काउने खालको छ । यी सबैकुराले नेपालको फोटो कहाँ आउँछ भन्दा तीन नम्बर प्रदेशमै आउँछ । तीन नम्बर प्रदेशलाई हेरेर मात्र विदेशी पर्यटकहरुहरु अरु प्रदेशमा जान्छन् । तीन नम्बर प्रदेश गुलियो छ, नेपाल गुलियो छ । तीन नम्बर प्रदेश तितो छ नेपाल तितो छ । तीन नम्बर प्रदेश उज्यालो छ, नेपाल उज्यालो छ । तीन नम्बर प्रदेश अध्यारो छ त नेपाल अध्यारो छ भन्नुपर्ने भएकोले तीन नम्बर प्रदेश ऐना हो । त्यसैले ऐनालाई सफा गरिरहनु पर्छ ।
तपाईहरु आउनुभएपछि नयाँ कामहरु चाँही के के अघि बढे ?
पुष्पलाल चक्रपथ, मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश विश्वविद्यालय नयाँ नै हो । यो क्षेत्रमा यत्तिधेरै स्रोत छ कि टिप्न हामीलाई समय लाग्छ । टिप्नका लागि रिर्सज पर्सन चाहियो । तुरुन्तै चाहियो, तुरुन्तै सकिन्छ । हामी भाग्यमानी पनि छौ । हामीलाई कृषि, जंगल, विज्ञान, डेरी कुनै पनि विषयमा विशेषज्ञ चाहियो भने हामी तीन घण्टा भित्र पाउन सक्छौ । अरु प्रदशेले तुरुन्तै नपाउन सक्छ । त्यसैले हामी भाग्यमानी पनि छौ ।
नेकपाको सरकार भएकाले संविधानले समाजवाद उन्मुख न्याय र समानतामा आधारित समाज व्यवस्था कायम गर्ने भनिरहेको छ । समृद्धि र समाजवादका लागि तपाईको पहल के हुन सक्छ ?
अहिले भनेकै कुराहरु नै संवृद्घिसँग जोडिएका छन् । संवृद्घि नभई, उत्पादन वृद्घि नभई समाजवाद आउँदैन । समाजवाद आउनको लागि उत्पादन बढाउनु पर्दछ । उत्पादनमा बृद्धिगर्न तीनवटा कुरामा हामी पहिले जानु पर्दछ । माटो, पानी र जंगल । यी तीनवटा ठाउँमा गएपछि मात्र उत्पादन हुन्छ । उत्पादनले समाजवाद ल्याउँछ । गफ गरेर मात्र समाजवाद आउँदैन । उत्पादनले समाजवाद र समृद्धी ल्याउँछ भनेर हामीहरु त्यसका लागी लागिरहेका छौ ।
उत्पादनले समाजवाद ल्याउछ भनेर तपाइहरु लाग्नु भएकोछ ,संभव छ ?
समाजवाद ल्याउनका लागि हामीले पुँजीवादको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पुँजीवाद जनताको हातमा हुन जरुरी छ । पुँजीवाद ल्याउने तागत जमिन, जंगल र पानीमा छ । ती स्रोतहरु परिचालित गर्ने हो भने संवृद्घिको यात्रा टाढा छैन । काम गर्न पक्कै पनि गाह्रो छ । देश यही हो, समाज यही हो । काम गर्नेलाई खुट्टा तान्ने प्रविद्घि धेरै छ । तर अठोट र जिम्मेवारीवोध सहित हिडिएको काम पुरा हुन्छ । हामी माथि जनताको आशा भरोसा र समर्थन छ । अतः हामीले यो गर्नै पर्छ । तमाम उल्झनलाई पन्छाएर भएपनि हामीले समृद्धी ल्याएरै छोडछौ ।
नयाँ संरचनामा गएपछि काम गर्न कत्तिको चुनौती छ ?
एउटा त कानून निर्माणकै चुनौती छ । सबैभन्दा पहिला कानून निर्माणहरु हुनु पर्यो । लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभूती गराउनका लागि कानूनी राज त हुनु परे्यो नी । जतिसुकै राम्रो काम होस् न त्यो गर्नका लागि कानून अपरिहार्य हुन्छ । आम जनताको सपोट त छदैछ । तर पनि सरकारको विरोध गर्ने एउटा तागत अझै बाँकि छ । उ आलीबाट लडेको छ । इतिहासदेखि अहिलेसम्म र भविष्यसम्म त्यो तागत शासन भनेको आफैले मात्र गर्ने हो भन्ने एउटा ठूलो घमण्डीमा छ । तर त्यो आज आलीबाट लडेको छ । त्यसैले ऊ घुडामा लागेको हिलो ट्कट्क्याउँदै अहिले सरापिरहेको छ । उ भनिरहेको छ, आलीमा त हामी हिड्नु पर्ने हो, तिमीहरु हिड्यौ भनिरहेको छ । हामीले हिड्दा खेरी डाँहा गरेर हुन्छ ? हामीले यो सत्ता चोरेर खोसेर र लुटेर ल्याएको होइन नी । हामीले जनताको मतबाट जितेर ल्याएको सत्ता हो । हामीलाई आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा विश्वास छ । तरपनि हामीलाई चुनौती भने छ । किनकी पानीलाई विजुलीमा परिणत गर्नु छ । माटोमा अमृत फलाउन छ । पशुपालन गरेर त्यसबाट दुध, दही, पनिर बनाउन पनि त्यती सजिलो छैन । उत्पादनमा जानु भनेको पसिना बगााउनु हो । पसिना काट्ने काम गाह्रो त हुन्छ नै । तर पनि हामी संवृद्घिको यात्राका लागि प्रतिवद्घ छौ ।
समृद्धिको यो यात्रामा एक अर्को प्रदेशबीच कतिको समन्वय भइरहेको छ त ?
संरचना बनेकोले कुरा गर्न त सजिलो छ तर पनि एक अर्को प्रदेशबीच आफ्ना अनुभवहरु साटासाट गर्ने मौका भने पाइएको छैन । पहिलो संरचनामा काम गर्नुपर्दा सबै अलिबढि नै व्यस्त भईयो । फुर्सद त्यती भएन तर हामी एक अर्का बीच बस्ने तयारी बारे सोचिरहेका छौ ।
बढ्दो वेरोजगारको समस्या छ, वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या पनि कमि आएको छैन, अनि मानव बेचविखनका घटनाहरु पनि प्रदेश तीनमा धेरै नै छन् यस्को समाधानका लागी चाही कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर आफ्नै देशमा रोजगारी सृजना गर्न सके कोहीपनि मानिस कानूनी वा गैर कानूनी ढंगबाट विदेश जाँदैन भनेर हामीले काम गरिरहेका छौ । सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुले त्यस विषयमा काम गरिरहेका छन् । समाजवाद तर्फको यात्रा लाग्दा यी सबैचिजहरु आउँछन् । हाम्रो यात्रा समाजवाद तर्फको हो भने आम जनतालाई अर्थतन्त्रसँग, उत्पादनसँग गास्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनसँग गाँस्दा यो देशको माटो पानी र जंगलसँग प्रेम बसाउन जरुरी छ । विदेशमा जाने आउने भन्ने कुरा मुल विषय होइन, यही राम्रो काम दिन सके मानिसहरु अर्काको देशमा काम खोज्न जाँदैनन् ।
केन्द्र सरकारकाको सहयोग कत्तिको पाइराख्नु भएको छ ?
राम्रै पाइराख्या छौ ।
तपाइहरु राम्रो काम गरिरहेका छौ भन्नुहुन्छ बाहिर त धेरै आलोचनाहरु आइरहेको छ नी ?
हामी आएको १८ महिना मात्र भएको छ । काम गरिरहेका छौ । कतिपय विरोधीहरुको काम भनेकै विरोधगर्ने मात्र हो । सरकारले अहिले सुनै सुनको वालाको खेती गर्ने हो, भने पनि आलोचना गर्नेहरु गरिरहन्छन् । त्यो आलीबाट लडेको छ । अनि घुडा टक्टक्याँउदै उनीहरु आलोचना गर्छन । तर उनीहरुको आलोचनाले हामीलाई राम्रै गर्छ । आलोचनाबाट डराउने पर्ने केही छैन । हाम्रो कामले जनता खुसी छन् विरोधीहरुको काम भनेको विरोध गर्नु हो । हामीले गर्छन् भन्ने विश्वस पनि जनतामा छ । केही परिणाम देखिएका छन्, केही देखिने क्रममा छन् । अर्को कुरा अब जनता खुसी छन् की छैनन् भन्ने अर्को चुनावमा पनि देखिएला । माइतघर मण्डलामा दुईचार जना मान्छे उर्फिदैमा जनता कहाँछन् भन्न पाइदैन । तर पनि आलोचना गर्नेहरुलाई चाँहि शूभकामना छ । हामीले नेपालका प्रतिपक्षिको नाडी राम्रै तरिकाले छामेका छौ ।